Booqashada Madaxweyne biixi ee Xarunta dhexe ee kulmiye waa laba hal midkee ? | Berberatoday.com
Booqashada Madaxweyne biixi ee Xarunta dhexe ee kulmiye waa laba hal midkee ?
February 6, 2018 - Written by berberatoday berberatoday
Hargeysa(Berberatoday.com)-Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa shalay booqasho ku tegey xarunta guud ee xisbiga KULMIYE oo ah xisbiga uu madaxweynuhu ka soo jeedo ee haya talada dalka Somaliland.
Madaxweyne Biixi, saxaafadda lamuu hadal, waxaanu gudaha hoyga xisbiga kula sheekaystay hoggaanka xisbiga, qaar ka mid ah haweenka xisbiga ee golaha dhexe ka tirsanaa iyo odayaal kale oo ka mid ahaa raggii ka qayb qaatay guushii uu madaxweynaha ku noqday.
Xoghayaha guud ee xisbiga KULMIYE, Xasan Siciid Yuusuf ayaa saxaafadda u sheegay in ujeedada madaxweynuhu ahayd booqasho keliya oo uu kula kulmay hoggaanka iyo intii ka joogtay golaha dhexe kuwaas oo aanu weli fursad u helin inuu la kulmo oo uu u mahadceliyay.
Hase yeeshee dadka siyaasadda falanqeeya ayaa aaminsan in booqashada madaxweynuhu ka qoto dheerayd booqasho keliya balse ay xambaarsanayd farriin kale oo siyaasadeed.
Dadka arrimaha siyaasadda gorfeeya ayaa aaminsan in ujeedada madaxweynuhu ahayd inuu diro farriin ah inaanu wareejin doonin guddoomiyenimadii xisbiga KULMIYE oo ay wararka qaarkood doorashada ka hor tilmaami jireen inuu doorashada kaddib dhaqso u wareejin doono, sidii uu yeelay mudane Siilaanyo oo 45 cisho ka dib doorashadiisii 2010, xilkii guddoomiyaha KULMIYE ku wareejiyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Laakiin intii uu mdaxweyne Biixi guulaystay, waxaa marar kala duwan, soo baxay warar tibaaxaya in mudane Biixi aanu guusha kaddib xilka wareejin doonin, isaga oo dareensan in xisbiga oo gacantiisa ka baxaa ay caqabado ku keeni doonto maamulkiisa.
Doc kale haddii laga istaago; booqashada madaxweynuhu shalay ku tegey xafiiskiisii Kulmiye, waxaa ay mar kale xusuusta ku soo celinaysaa hadalkii uu hore u sheegay ee ahaa in marka uu xafiiska madaxweynaha tago aanu xisbiga illaawi doonin, xukuumaddiisuna ka soocnaan doonin. waana sababta ay dadka qaar ugu doodayaan in socdaalka kooban ee uu madaxweynuhu ku tagay xaruntii xisbigu ay la xidhiidho xaaladaha siyaasadeed ee dalka ka taagan. Waxaana laga yaaba in uu doonayay inuu taageerayaashiisii KULMIYE ee kursiga saaray uu tuso inaanu weli ka fogaan maqalkooda iyo la kulankooda taas oo dhinaca kalena farriin u noqon karta xisbiyada mucaaradka ah oo dareemi kara in xisbigii KULMIYE weli xooganyahay, haystana taageerayaashiisii.
Taageereyaal badan oo Kulmiye ka tirsanaa si adagna u soo shaqeeyey xilligii ololaha doorashada, kuwas oo filayey in ay abaal celin heli doonaan guusha kaddib, ayaa uu madaxweyne Biixi ka fogeeyey xukuumadda cusub ee uu mgacaabay iyo guud ahaan maamulkiisa, waxa aanay taasi abuurtay dareen isa soo taraya oo ah in rag badani isu arkeen in mudane Biixi uu meel cidlo ah kga dhaqaaqay. Sidaa awgeed waa ay dhici kartaa in madaxweynuhu fikirkaas ka duulayey, markii uu qaadanayey go’aanka uu ku tegey xarunta dhexe ee xisbiga.
Ujeeddo kasta oo ay booqashada madaxweyne Biixi daarnayd, waxaa su’aalo jawaab sugaya ah sida uu ka yeelo mustaqbalka kursigiisa xisbiga iyo dib u dardargelinta iyo isku dubaridka laga yaabo in uu xisbigu uga baahan yahay.